Nhau - Yakabatanidzwa kusimudza michina yekukwirisa
Zvakabatanidzwa kusimudza michina yekukwirisa mhando mhando nyowani yehunyanzvi hwekugadzira michina hwakagadziriswa nekukurumidza pakutanga kwezana rino, iro rine simba rakakosha mukufambira mberi kwehunyanzvi hwekuvaka munyika yangu. Inoshandura mashandiro epamusoro-soro kuita mashandiro epasi, uye inoshandura mashandiro akamiswa kuita mashandiro emukati meiyo furemu. Iyo ine yakakosha yakaderera-kabhoni, yezvigadzirwa zvepamusoro, uye ine mari yakawanda, yakachengeteka, uye iri nyore.
1. Yakaderera kabhoni
Sevha 70% yesimbi yekushandisa
Sevha simba rekushandisa ne 95%
Sevha makumi matatu muzana ezvakavakwa zvinoshandiswa
Inoshanda kumutumbi mukuru wezvivakwa pamusoro pemamita makumi mana nemashanu. Iyo yakakwira pasi, inowedzera hupfumi, uye chivakwa chimwe nechimwe chinogona kuchengetedza 30% -60% yemutengo.
Inogona kuiswa kumutumbi mukuru wezvimiro zvakasiyana
Iko kushandiswa kweanowirirana otomatiki synchronous control system uye kure kudzora system kunogona kushingairira kudzivirira mamiriro asina kuchengetedzeka, uye kutora akawanda-seti disc mhando chengetedzo inorwisa-kudonha michina kudzivirira kutadza kwakadai sekutadza kweye reset kifaa, icho chinogona kuve nechokwadi chekuti inodzivirira furemu inogara iri mune yakachengeteka mamiriro uye zvinobudirira kuwana kudzivirira kudonha.
Iyo microcomputer mutoro tekinoroji inodzora system inogona kuratidza iyo yekusimudza chinzvimbo munguva chaiyo uye otomatiki kuunganidza iwo mutoro kukosha kweumwe neumwe anosimudza muchina chinzvimbo. Kana mutoro weimwe muchina chinzvimbo ukapfuura 15% yeiyo dhizaini yekukosha, inozoerekana yaridza uye kuratidza chinzvimbo chealamu muchimiro chezwi uye nechiedza; kana ichidarika makumi matatu kubva muzana, boka rekusimudza michina rinomira rega rega kusvikira mhosho yacho yabviswa. Iyo inodzivirira inodzivirira zvingangoitika njodzi dzekuchengetedza zvinokonzerwa nekuwandisa kana kunyanya kurasikirwa mutoro.
Ziva mashandiro epasi pekuvaka uye epamusoro kushandiswa. Iyo yakaunganidzwa pasi pezasi kwemuviri mukuru wechivako panguva imwechete, yakasungirirwa kune chivakwa, uye ichienderera ichivandudzwa pamwe nekuwedzera kwehupamhi hwepasi. Iyo yese mashandiro maitiro haagare mamwe makran, ayo anovandudza zvakanyanya kugona kwekuvaka, uye nharaunda saiti iri zvine hunhu, uye manejimendi uye kugadzirisa zviri nyore, mhedzisiro yekuvandudzwa kwekushanda kwakakurumbira.
Paza chimiro chinotyisa cheyakajairwa scaffolding, ita iyo yakazara mufananidzo weiyo kuvaka ipfupi uye yakajairwa, uye inogona kunyatsoita uye intuitive kuratidza yakachengeteka uye yakabudirira mufananidzo weiyo kuvaka chirongwa.
Ringlock Scaffolding Zvikamu, Heavy Duty Ringlock Scaffolding, Ringlock Scaffolding chikomboredzo, Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo, Metal Cuplock Scaffolding,